Lilly Satidtanasarn, ilay zazavavy 12 taona miady amin’ny loto ateraky ny plastika ao Thailandy · Global Voices teny Malagasy
"Raha misy azonao atao hanampiana dia tokony hanampy foana"
Voadika ny 14 Oktobra 2019 18:29 GMT
Vakio amin'ny teny русский, македонски, Ελληνικά, Italiano, 日本語, Español, bahasa Indonesia, English
I Lilly Satidtanasarn mampianatra ireo ankizy any amin'ny garabola momba ny ilàna ny fanafoanana ny plastika fampiasa indray mandeha monja ao amin'ny fiarahamonina. Sary avy ao amin'ny pejy Facebook-n'ny Bye Bye Plastic Bags Thailand
Isan'ireo nandray anjara tamin'ny hetsipanoherana ‘die-in‘ tamin'ny 20 Septambra 2019 i Ralyn ‘Lilly’ Satidtanasarn, 12 taona, natao teo alohan'ny Minisiteran'ny Harena Voajanahary sy ny Tontolo Iainana ho mariky ny fiharatsian'ny krizin'ny toetrandro. Anatin'ny fitokonana ho an'ny toetrandro maneran-tany nataon'ireo vahoaka manerana izao tontolo izao izy io, izay saika tanora avokoa ny ankamaroany, hanazavàna ny ilàna hetsika tsy misy hataka andro mba hampitsimbadihana ny hafainganan'ny fitomboan'ny hafanan'ny planeta.
Fantatra ao Thailandy i Lilly noho ny fiarovany ny hevitra hanenàna ny fampiasàna plastika. Niresaka tamin'ireo solontenan'ny governemanta, lehiben'orinasa, sy ireo mpitari-draharaha monisipaly izy tanatin'ny efa-taona lasa momba ny loto ateraky ny plastika fampiasa indray mandeha monja.
Nahomby ny ezaka nataony tamin'ny fisarihana ny saina amin'ny fako plastika mampiahiahy ao Thailandy. Ary nekena ny fiarovan-keviny tamin'ny fandresena lahatra ny fivarotana lehibe iray ao Bangkok hanajanona ny fanomezana harona plastika mandritra ny iray andro anatin'ny herinandro.
Tanatinà tafatafa niarahana tamin'ilay mpanoratra tamin'ny alàlan'ny WhatsApp, izay nohamorain'ny fianakaviany, nilaza i Lilly fa tsy hainy loatra raha tokony hiantso ny tenany ho mpiaro ny tontolo iainana izy satria heveriny fa andraikitra kokoa ny asa ataony:
Tsapako fa andraikitro ny manao zavatra momba izany ankehitriny. Tsy fantatro hoe mpiaro ny tontolo iainana araka ny teneninareo aho. Te hanao zavatra ahafahako manampy fotsiny aho. Miteny amiko foana ny fianakaviako fa raha misy azonay atao hanampiana dia tokony hanampy izahay. Nahita olana marobe aho aty amin'ny toerana iainako ary fantatro fa na ireo ankizy toa ahy aza dia afaka miova mba hanao izay azony atao momba izany, izay no mahatonga ahy hanao izao. Ary koa, tsy ampy raha izaho -samirery no manao zavatra. Tokony hanampy koa ny rehetra. Ny governemanta sy ny manampahefana koa. Afaka miteny ny hafa hanampy aho amin'ny fampahafantarana azy ireo olana misy sy ny hoe misy ny zavatra azony atao hanarenana izany.
Nanomboka nanahy ny momba ny tontolo iainana i Lilly rehefa nahita faok plastika teo amorontsiraka iray nandritra ny fialantsasatry ny fianakaviany fony izy valo taona.
Mizara sasantsasany amin'ireo fanamby sy hasarotana natrehany izy no sady manakatra ireo manampahefana sy ireo mpitarika hafa ao amin'ny firenena:
Mieritreritra ireo olon-dehibe fa manao entimody na tetikasa any am-pianarana aho. Tsy noraisin-dry zareo ho matotra aho saingy nanohy nandefa imailaka tany aminy aho ary amin'izao, mandray ahy ho matotra ry zareo. Manao fihaonana miaraka amin-dry zareo aho ary manolotra ny hevitro ary nampiseho azy ireo ny zava-bitako hatreto. Hanaraka ahy ny olona, tsy satria noho ny fananako hevitra na fahalalàna. Hanaraka ahy ny olona satria manao izany aho, nasehoko azy ireo fa nanao fiovàna aho.
‘Miady’ amin'ny plastika i Lilly, izay Greta Thunberg an'i Thailandy.
Maro ireo tati-baovao manoritsoritra an'i Lilly ho ilay Greta Thunberg an'i Thailandy, ilay zazavavy Soedoazy 16 taona mpikatroka mafana fo ho an'ny tontolo iainana izay lasa endrika malaza ho an'ny fitokonana ho an'ny toetrandro maneran-tany. Toy izao ny fandraisan'i Lilly izany:
Manan-danja be ho ahy i Greta. Marika izy fa manana fahefàna hanova ihany koa ny ankizy ary efa ela dia ela aho no nino izany. Tsy mandray ny tenako ho Greta an'i Thailandy aho. Izaho ihany ny tenako. Koa, Lilly aho. Miaina aty Thailandy aho ary olompirenen'izao tontolo izao. Ny tany no iombonantsika rehetra.
Izao ny fampahatsiahivan'i Lilly ho an'ireo solontenan'ny governemanta Thai:
Mieritreritra aho fa raha manaiky ny governemanta fa manan-danja ny tontolo iainantsika dia tokony hanao fanambaràna ry zareo fa anaty krizy isika anatin'ny faritra rehetra ato Thailandy. Efa am-polo taona maro isika izao no nahita haintany sy tondradrano henjana. Maro dia maro ireo zavamananaina anaty ranomasina no mary noho ny fihinanana plastika. 34%-n'ny alamando sisa no miangana aty Thailandy. Laniantsika ny angovo ambanin'ny tany. Tsy hisy hiangana intsony. Ary be loatra ny ozinina vaovao aty amintsika ka mitombo ny famoahana gazy karbônika. Noho ireo olana rehetra atrehintsika ireo, tokony hanambara ny Hamehana ara-Toetrandro ho an'i Thailandy isika.